Vaovao - Vakana Voahangy volamena miloko sy vakana volamena any amin'ny Ranomasina atsimo
Vakana Voahangy volamena miloko sy vakana volamena any amin'ny ranomasina atsimo
Ny perla volamena lazaintsika matetika dia manondro ny Voahangy amin'ny Ranomasina atsimo, izay karazana voahangy an-dranomasina teraka any amin'ny ranomasina avaratry Aostralia, Filipina, Malaysia ary ny vondronosy Indonezia. Noho ny lokony volamena, dia nantsoina hoe Voahangy volamena an-dranomasina atsimo izy, antsoina koa hoe Voahangy Ranomasina atsimo. Tsy maninona amin'ny lafiny sarobidy na vidiny, azo antsoina hoe ny mpanjaka voahangy izy io. Vitsy kokoa ny perla any atsimo atsimo.
Amin'ny ankapobeny dia manana savaivony 9-16mm ny Voahangy amin'ny Ranomasina atsimo, ny ankamaroany dia eo anelanelan'ny mavo sy fotsy, vola kely sarobidy amin'ny volamena manankarena.
Noho izany, ny vidin'ny vakana volamena dia avo dia avo. Ny fanenjehana ny tsena dia mahatonga ny mpanamboatra maro misafidy handoko perla. Ka ahoana no hanavahana ny voahangy vita amin'ny loko sy ny voahangy volamena voajanahary?
Kamo ny lokon'ny vakana nolokoana, fa ny lokon'ny perla voajanahary dia tsy loko matevina, misy loko miaraka aminy matetika. Avadiho miadana ny perla, dia ho hitanao ny miova tsy miovaova toy ny avana. Ny lokon'ireo perla nolokoana dia ho mpitovo loatra, na avy aiza na amin'ny lafiny aiza no itovizany, ka mazava ho azy fa tsy mitovy amin'ny perla voajanahary.
Ho an'ny voahangy vita amin'ny loko, ny pigment dia hipetraka amin'ny toerana somary ambany ny haavony, avy eo dia hatsangana ny toerana, na izany aza, ny perla voajanahary dia manana loko mitovy ary tsy misy tranga toa izany.
Raha sendra ny perla any amin'ny Ranomasina atsimo miloko volamena manankarena sy tsara endrika ianao, nefa mora dia lafo ny vidiny, tandremo. Satria kely ny haben'ny perila any amin'ny Ranomasina atsimo miaraka amin'ny loko tsara, ny endriny tsara ary ny tsy misy kilema, dia ho lafo be ny vidiny.
Raha milaza ny mpivarotra fa manana voahangy volamena boribory 11-13mm sy tsy misy tsiny izy ireo, ary mora kokoa ny vidiny noho ny efa fantatrao taloha, aza manalavitra izany.
Raha latsaky ny 8mm ny savaivon'ny perla any atsimo, dia mila mailo be ianao.
Ny savaivon'ny perla volamena dia amin'ny ankapobeny 9-16mm, izay fahatsapana mahazatra.
Raha tsy azonao antoka na nolokoina ireo perla novidinao, dia mba ento any amin'ny masoivoho fitiliana manam-pahefana hanaovana fitiliana.
Fotoana fandefasana: Jul-03-2021
Fanomezana Bridesmaid Voahangy Rano, Voahangy marina anaty rano velona, Kavina Stud Perla, Voahangy fotsy mangatsiaka fotsy, Aaa Voahangy Rano, Kavina fampakaram-bady,